Vaovaon'ny indostria - vaovao - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd.
an-trano > Vaovaon'ny indostria
Ny dikan'ny sy ny fampandrosoana ny ballet
Ballet manokana dia manondro endrika klasika eropeana misy famaritana, fahaiza-manao ary fepetra ilaina amin'ny hatsarana; na amin'ny ankapobeny dia ilazana ny fanehoan-dihy izay mampiasa fihetsiketsehana sy fihetsika ataon'ny olombelona hanehoana ny atin'ny tantara an-tsehatra mba hampiroboroboana ......
Fantatrao ve ny tantaran'ny Ballet Shoes?
Ny dihy sy ny aloha loatra dia mpivady voajanahary, ary ny kiraro baleta dia ohatra tsy fahita firy. Ny kiraro baleta vita amin'ny plastika dia fantatra amin'ny endriny lamaody tsy manam-potoana sy kanto ary ambany, izay mety tsy maintsy ananana amin'ny fitafiana zazavavy frantsay rehetra.
Inona no atao hoe Tie-dyeï¼Ÿ
Ankoatr'i Chine, India, Japan, Cambodia, Thailand, Indonesia, Malaysia ary ny firenena hafa dia manana asa-tanana vita amin'ny fatorana. Tamin'ny taona 1970 dia nanjary asa tanana malaza ny famonoana kravaty, be mpampiasa amin'ny akanjo, ny fatorana, ny fefy amin'ny rindrina, sns. vokany-loko.
Ahoana no niandohan'ny Ballet Tutu?
Raha resaka ballet dia fantatry ny rehetra indrindra ny "Swan Lake", ny sarin'ny ango fotsy, ny fihetsika tsara fandihizana ary ny "Four Little Swans" mahazatra. Fohy sy fohy indray ny zipo gazy, avy eo ambanin'ny lohalika ka hatrany ambonin'ny lohalika. Ny fampandrosoana ankapobeny dia nifindra avy......
Toa manonofy andriambavy ny zazavavy rehetra. Te-hitafy ny akanjo manga an'i Elsa izy, te-hanao ny akanjo fotsy fampakaram-bady rehefa manambady izy, ary te-hanao akanjo nofinofy feno loko.